“ပြန်စာ”… – PVTV Myanmar
ညီနဲ့ညီမ ပို့သသောစာ ရတယ်။
အသံ ငါး လောက်ကြားပါတယ်။
ဖျက်ရာ ခြစ်ရာ စာမျက်နှာတွေက
Like – 6.1K Share – 430
Zawe Htet says:
2021-07-04 at 3:57 PM
NUG ကတော့ D-day ကြေငြာမယ် ဘာမယ်နဲ့ ပြောနေတာပဲ …စစ်ခွေးတွေကတော့ ပြည်သူတွေအပေါ် နေ့တိုင်း D-day အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသတ်ပြီးရင်းသတ်နေလေရဲ့။ D-day (Death day)
ဒီပဲယင်းတစ်မြို့နယ်ထဲမှာတင် ပြည်သူအယောက် (၂၀)ကျော် သေဆုံးကြောင်း သတင်းအတိအကျပဲ။ကျန်မြို့နယ်တွေလည်းရှိမှာပဲ။
အဲ့တော့ NUG ကိုပြောချင်တာက D -day ဆိုတာက တကယ်ကောကြေငြာပေးမှာလား…?တကယ်ကောဖြစ်လာမှာလား…?
စစ်ခွေးတွေရဲ့ထိုးစစ်ကို ခုခံတုန့်ပြန်ဖို့ဘာ အစီစဉ်တွေဆွဲထားလဲ…?
D-day ဆိုတဲ့ဂျင်းစကားကြီးရဲ့အောက်မှာ ကျနော်တို့ အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်လေးတွေ ဘယ်လောက်တောင်ပေးဆပ်နေရဦးမှာလဲ…?
မောင်းပြန်သေနတ်တွေကို တူမီးနဲ့ ခံပြစ်နေရတာ ပွဲက မျှတမနေဘူးရယ် အခုဆိုမိုးတွေကရွာ တူမီးက ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူး။
အခုပြည်သူတွေအပစ်သတ်ခံနေရတယ် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဘယ်သူ့ကိုအဖေခေါ်ရမလဲ…?
ဒီနေ့ ဒီပဲယင်းဖြစ်စဉ် NUG က လူတွေသိကြပါသလားလို့ပဲ မေးချင်တယ်။
ဒီပဲယင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ…?ဒီပဲယင်းကပြည်သူတွေ တောကြုံအုံကြားမှာ မိုးရွာကြီးထဲမှာပြေးနေရရှာတယ်။အမှောင်ထဲမှာပြေးနေရတာနော်…လက်နှိပ်မီးမသုံးရဲဘူး စစ်ခွေးတွေကတောနင်းပြီးရှာနေလို့။
အခုအချိန်အထိ အလောင်းတွေလိုက်ရှာနေရတုန်း အတည်ပြုလို့မရတဲ့ အလောင်းတွေရှိသေးတယ်။ဘယ် ဆယ်လီကမှ စပိကောက် ဆိုလား ဘာလား ဘာတစ်ခုမှလုပ်မပေးကြဘူး။ဘယ်သတင်းဌာနကမှ အပူတပြင်းမေးမြန်းသတင်းမယူကြဘူး။
မန်းလေးဖြစ်တုန်းက စပိကောက်လိုက်ကြတာ… မန်းလေးစပိကောက်လုပ်ပေးတာကိုအပြစ်မပြောဘူး မနာလိုလည်းမရှိဘူး။
အခုဒီပဲယင်းကျတော့ ဘာလို့လဲ…?ဒီပဲယင်းကပြည်သူတွေက ဘာတွေမို့လဲ…?ခင်များတို့တွေ မြင်စေချင်တယ်ဗျာ😢😢
ဒီပဲယင်းသားတွေ အားတင်းထားကြပါ။ခင်ဗျားတို့အတွက် ဘယ်သူကမှ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ပေမဲ့ ကျုပ်တို့ဒီပဲယင်းသားအချင်းချင်း ကူညီမယ်။ခင်များတို့ကျုပ်တို့က မျက်နှာမွဲ အညတရ မြို့သူမြို့သားတွေပါ။
ဘယ်သူမှ အားမပေးလည်း ငါ့တို့ကိုယ်ငါတို့ အားပေးကြမယ်….
2021-07-04 at 4:05 PM
モ モ says:
2021-07-04 at 4:11 PM
ေႏြးေထြးတဲ့ မတ္စစ့္ says:
Thi Thi Nyo says:
2021-07-04 at 4:54 PM
2021-07-04 at 5:08 PM
2021-07-04 at 5:34 PM
Myat Paing says:
2021-07-04 at 6:13 PM
တင်ဆက်မှုသည် ဆွဲဆောင်မှု အားနည်းနေသေးသည်ဟု ရိုးသားစွာသုံးသပ်မိပါသည်။
2021-07-04 at 6:14 PM
2021-07-04 at 6:16 PM
.. ညွန့်ဝင်းကြီးသေတော့ .. ဒီလူ့ပါသွားသတိရမိတယ် ..
..“ 🎼စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့တာ ဒို့မမှုပါ .. သယံဇာတများပေါတဲ့ပြည် 🎼´´..
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့လိုက်တာ မြန်မာပြည်လဲ ပြာပုံပဲကျန်တော့တယ် ပေါများတဲ့ သယံဇာတတွေ သူခိုးစျေးနဲ့ထုတ်ရောင်းလိုက်တာ တိုင်းပြည်ကအခွံပဲကျန်ပဲ .. ခွေးသူခိုးစစ်ဘိုချုပ်တွေကတော့ ချမ်းသာကုန်တယ် ..
..“ 🎼မြန်မာ အားကစားကမ္ဘာကိုလွှမ်းစေရမည် 🎼..´´တဲ့ ..
ဘောလုံးကွင်းတွေ ကလေးအားကစားကွင်းတွေ ပန်းခြံတွေအကုန်သိမ်းပြီး ရောင်းစားပစ် ဂေါက်ကွင်းလုပ်ပစ်လိုက်တာ .. မြန်မာ့အားကစားက ကမ္ဘာမပြောနဲ့ .. အာဆီယံမှာ .. နောက်ဆုံးရောက်နေပြီ ..
.. အဲ့သလို သောက်ကျိုးနဲ အဆိပ်အပင်း ဖားသီချင်းမျိုးတွေ ရေးဆိုခဲ့တဲ့ လူ ..
သေသာသွားတယ် ခုချိန်ထိလူတွေရွံမုန်းကြတုန်းး ..
နောက်ထပ် သန်းရွှေ ခင်ညွန့်တင်မကဘူး သောင်းလှိုင်သားပါ ခံတွင်းတွေ့သိပ်ကြိုက်ဇာတ်ကား ..
..“ 🎼ယူပါကယ်ပါဦးမပြောချင်ဘူးး🎼 .. ´´
2021-07-04 at 6:31 PM
ႏွလုံးလွ ကိုမင္းကိုႏူိင္ အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္
ဆုပန္ ေနစဲ says:
2021-07-04 at 7:58 PM
Sunanda A Shin says:
2021-07-04 at 8:25 PM
2021-07-04 at 9:16 PM
2021-07-04 at 9:26 PM
နက္ရွိဳင္းလြန္းပါတယ္ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္
နွေဦး မိုး says:
2021-07-04 at 10:20 PM
2021-07-05 at 7:38 AM
ထိလိုက်တဲ့ စာသား တွေ
2021-07-05 at 7:55 AM
2021-07-05 at 9:19 AM
2021-07-05 at 9:52 AM
Win Myo Aung says:
2021-07-05 at 9:15 PM
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် အောင်ကိုအောင်ရမည်
2021-07-06 at 2:18 PM
Zaw Myo Lwin says:
2021-07-06 at 4:46 PM
ရင်ထဲအထိနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်ပါဘဲ အကိုကြီး အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်
2021-07-06 at 4:57 PM
အကိုကြီး ကိုမင်းကိုနိုင် ကျန်းမာပါစေ။
2021-07-07 at 7:15 AM